Rooble oo meesha ka saaray habraacii Guddiga doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo meesha ka saaray habraacii Guddiga doorashada
War ka soo baxay Xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, ayaa lagu sheegay in Golaha Wadatashiga uu diyaarin doono habraaca doorashada Aqalka hoose, taas oo meesha ka saareysa habraacii guddiga doorashada.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxmed Xuseen Rooble, ayaa dib ugu laabtay dalka kadib booqasho rasmi ah oo uu ku tagay dalka Masar, wuxuuna si deg deg ah u shaaciyay in shirkii Golaha Wadatashiga ee Maanta loo ballansanaa la qaban doono sabtiga soo socda.
“Shirka Golaha Wadatashiga Qaranka ayaa si rasmi ah uga furmaya Afisyoone maalinta Sabtida ah oo taariikhda ay ku beegan tahay 21-ka Agoosto, 2021”. Ayaa lagu yiri war soo baxay xaaafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Sida ku xusan warka Xukuumadda, “Kulanka waxa lagaga hadli doonaa diyaar garowga doorashooyinka Golaha Shacabka, diyaarinta habraacyada doorashooyinka, raadinta dhaqaalaha dhiman ee ku baxaya doorashooyinka iyo sidii horey loogu socon lahaa”.
Hadaba qodobka ah “diyaarinta habraacyada doorashooyinka”, wuxuu meesha ka saarayaa, habraacii aqalka hoose ee dhawaan ka soo baxay xubno ka mid ah Guddiga doorashooyinka Dadban, kaas oo abuuray khilaaf iyo kala jab guddiga ah oo ay gadaal ka riixayaan qaar ka mid ah madaxda Maamullada.
RW Rooble, sooma dhaweyn habraaca ka soo baxay xubnaha guddiga doorashada ee uu hor kacayo Guddoomiye Ciro, taas oo muujineysa in uu diiradda saarayo habraac ka yimaada dhanka Golaha wadatashiga.
Waxaa jira habraac doorasho oo la saxiixay bishii juun, kaas oo hal gacan ku jiray muddo dheer, ka hor inta uusan billowgii todobaaadkaan u soo bixin bannaanka, taas oo sababtay in walaac doorasho durba billowdo.
Ra’iisul Wasaare Rooble, ayaa looga fadhiyaa in uu ka shaqeeyo diyaarinta habraac doorasho oo ah mid dhexda yaalla oo aysan wax awood ah ku lahayn Madaxweynayaasha Dowlad goboleedyada oo boob iyo bililiqo kula kacay doorashooyinka kuraasta Aqalka sare.
Kadib shirkaan looga hadlayo arrimaha doorashooyinka, waxaa la filayaan in RW iyo Madaxda DG u safraan Sacuudiga, halkaas oo ay casuumaad rasmi ah ka heleen.